Cisco Anjozorobe : misaona ny fampianarana, 15 ireo mpianatra maty | NewsMada
Cisco Anjozorobe : misaona ny fampianarana, 15 ireo mpianatra maty
Mpianatra avy ao amin’ny Cisco Anjozorobe avokoa ireo 15 namoy ny ainy tamin’ilay lozam-pifamoivoizana nahafaty olona 47 tamin’ny lalana Anjozorobe. Nitondra teny fampiononana sy famangiana ho an’ireo fianakaviana nidonam-pahoriana ny minisiteran’ny Fanabeazam-pirenena.
Tao ireo ankizy roa avy amin’ny lycée Ambongamarina, tanora dimy avy amin’ny CEG ary ankizy telo avy amin’ny EPP. Ankizy efatra hafa kosa avy amin’ny sekoly FJKM ao an-toerana.
Nisy telo vavikely tamin’ireo mpianatra namoy ny ainy ireo no mpiray tampo, zanak’olona iray ary kambana ny roa zokiny (8 taona). 6 taona kosa ilay zandriny izay samy mpianatry ny EPP Ambongamarina avokoa izy telo mirahavavy ireo.
Nidina avy hatrany tany an-toerana ny lehiben’ny Cisco Anjozorobe raha vantany vao nahare ny vaovao. Efa tonga any Ambongamarina avokoa ny razana rehetra raha ny tatitra. Naneho fiaraha-miory amin’ny fianakavian’ireo mpianatra namoy ny ainy ny fianakaviamben’ny minisiteran’ny Fanabeazam-pirenena ary nirary fahasalamana ho an’ireo naratra.